"के यो माया हो" को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक
साउन २७, काठमाडौँ | लालिगुराँस एल्बममा रहेको पप गीत "के यो माया हो" को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । बिगत लामो समय देखि नै नेपाली गीत संगीतमा प्रवेश गरेका लालिगुराँस टिमले पहिलो गीतको म्युजिक भिडियो सार्थक डिजिटल म्युजिक प्रा.लि. मार्फत सार्बजनिक गरेका छन् ।
सुबिर पन्तको संगीत, रोहित बस्नेतको शब्द रचना रहेको उक्त गीतमा आवाज चर्चित गायक नेपाली तारा-२, सन्तोष लामा र मेलिना राईको रहेको छ । लालिगुराँस टिममा रोहित बस्नेत, सुबिर पन्त, सन्जित कुमार रायमाझी र जीवन पन्त रहेका छन् । उक्त टिमका संगीतकार सुबिर पन्त लन्डनमा छन् भने सन्जित जापानमा छन् साथै गीतकार रोहित बस्नेत र गायक जीवन पन्त नेपालमै छन् । १९९० देखिको गीत संगीतको यात्रा करिब २७ बर्ष पछाडी पूरा गर्दैछन् यो गीत मार्फत उक्त टिमले। लन्डन मै आफ्नो ब्यक्तिगत होम रेकर्डिङ स्टुडियो खोलेर आफ्नो गीत रेकर्ड गर्ने चाहाना पूरा गरेका सुबिर पन्त नेपाल बाटै पहिलो पटक आफ्नो गीत रेकर्ड भै भिडियो सार्बजनिक हुँदा निक्कै हर्षित छन् ! पछिल्लो समयको जल्दोबल्दो म्यूजिक कम्पनि "सार्थक डिजिटल"ले बजारमा ल्याएको उक्त गीतमा मोडल भेष राज गौतम र उर्मिला रायमाझिको बेजोड अभिनय देख्न पाईन्छ । संगीतकार सुबिर पन्तको एकल संगीत रहेको लालिगुराँस एल्बम केही अगाडि रिपोर्टस क्लबमा भब्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो। मेलिना राई र सन्तोष लामा पछिल्लो समयमा गायन क्षेत्रमा जमेको नाम हो । नेपाली कला क्षेत्रको बिकासमा उहाँहरुको देन अनुकरणीय रहनेमा दुईमत छैन् । यस गीतको छायांकन चितवनको रमणीय स्थलमा भएको हो ।
"के यो माया हो" गीत झट्ट सुन्दा चलचित्रको जस्तो सुनिए पछि हामिले सार्थक डिजिटलका प्रबन्ध निर्देशक जीवन पन्तलाई किन चलचित्रमा नदिनु भएको त उक्त गीत भनेर सोध्दा गीत फिल्मको लागि सुहाउने खालको छ र कुरा पनि आएको हो, कुरा नमिले पछि आफैले छायांकन गरेको बताए । लाखौं दर्शक तथा स्रोताको मन जित्न सफल हुनेमा कुनै दुबिधा छैन भन्नू हुन्छ उहाँ । उक्त गीतको छायांकन नरेन्द्र सिंह र सम्पादन निशान घिमिरेले गरेका हुन् ।